CompanyHub: Rindrambaiko CRM ho an'ny orinasa madinidinika | Martech Zone
CompanyHub: Rindrambaiko CRM ho an'ny orinasanao madinidinika
Alakamisy 3, 2016 Sabotsy, Janoary 14, 2017 Douglas Karr
Miaraka amin'ny rafitra sy ny sakana amin'ny fidinana an-tsehatra amin'ny sehatry ny fampandrosoana dia mahita sehatra maro kokoa mamely ny tsena isika. CompanyHub dia CRM orinasa kely izay sady tsotra no mahay miaraka amin'ny vidiny izay simba ka mila mahazo izay ilainao fotsiny ianao.
Ankoatry ny fahitana ny fantsom-pivarotana, CRM ampiasaina amin'ny varotra dia manome ny fahafaha-mandeha automatique fanaraha-maso:
CompanyHub dia manolotra an'io ary manana ireto manaraka ireto koa:
Mitantana anao Web hitarika fiovam-po.
Manampy amin'ny mandrindra ny varotrao dingana.
Fanaraha-maso ny mailaka tsy manam-petra sy tsindrio rohy avy amin'ny Gmail.
Paositra marobe miaraka amin'ny fanarahana Email.
Fanaraha-maso mandeha ho azy soso-kevitra, noho izany dia tsy ho tara mihitsy ianao.
mahery Dashboard ary tatitra manokana
mitantana Teny nalaina sy baiko ary mandefa mivantana ny teny nalaina avy amin'ny rafitra.
Andramo maimaim-poana ny CompanyHub
Tags: fanarahana fiaramailaka fivarotana betsakacompanyhubCRMfitaterana CRM manokanaGmailfanaraha-maso gmailbaikoQuotestabilao fivarotanafantsom-pivarotana
PRISM: Framework hanatsarana ny fifanakalozana haino aman-jery sosialy
Inona avy ny salanisa amin'ny taha misokatra sy ny tahan'ny Click-Through